Shaqaale katirsan DFS oo ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShaqaale katirsan DFS oo ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
December 27, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Gaariga qaraxa lagu xiray. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Hal qof oo ah shaqaale katirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay Muqdisho maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka.
Shaqaalaha qaraxa lala beegsaday ayaa magaciisa lagu sheegay Cumaan Dheere, waxaana loo qaaday isbitaalka, sida ay wararku sheegeen.
Ma jirto cid si dhaqso ah u sheegatay masuuliyada, balse maleeshiyada Al-Shabaab ayaa qaraxyo kan lamid ah ka fulisay gudaha Muqdisho oo ay ku bartilmaameedsatay masuuliyiin katirsan Dowladda Fedeaalka Soomaaliya.
axb wu shaqayn val fiiri Related PostsJuly 23, 2016 Maxamed Yaasiin Axmed oo loo doortay duqa GaalkacyoAugust 26, 2016 Al-Shabab attack on seaside restaurant in Mogadishu leaves at least 10 deadJanuary 23, 2019 Taliyihii hore [...]